Leverage Trading | PROFIT ၏ထိပ်ဆုံးအချက်များအတွက်သြဇာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။ ဒီဇင်ဘာလ 2021
ထရေးဒင်းအတွက်သြဇာကဘာလဲ? သြဇာအဓိပ္ပာယ်နှင့်မြင့်မားသောသြဇာပွဲစားကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း 2021
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 17 နိုဝင်ဘာလ 2021
Leverage Trading, သင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ဗဟုသုတများနှင့်သင့်ကိုလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားပါက၊ သင်သည်စွန့်စားရမှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစားချင်စိတ်ကိုရရှိပါကယခုသင်ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်ကိုသင်သိပါသလား။
တစ်ဖက်တွင်ယင်းသည်အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်လျှင်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ သို့ရာတွင်သြဇာသက်ရောက်သည့်ကုန်သွယ်မှုသည်လည်းအန္တရာယ်ရှိသည်။ တကယ်တော့၊ မင်းရဲ့ margin တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည် ထရေးဒင်းအတွက်သြဇာကဘာလဲ? ၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအားမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်၊ ရထိုက်ခွင့်ရှိသူ၊ သင်မည်မျှလျှောက်ထားနိုင်မည်၊ နောက်ခံအန္တရာယ်များနှင့်အခြားအရာများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။
မှတ်ချက် - ယူကေရှိသြဇာအကန့်အသတ်ကို EMSA ကဆုံးဖြတ်သည် - ဥရောပလက်လီအရောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကာကွယ်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။
Leverage Trading ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သြဇာအဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်
အတိုချုပ်ပြောရရင် leverage ကိုရောင်းဝယ်ခြင်းသည်သင်၏ brokerage account တွင်သင်ထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကနေထိထိရောက်ရောက်ငွေထုတ်ချေးနေတယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပွဲစားသည်သင့်အားအပိုဝင်ငွေယူပြီးချေးငွေများကို 'overnight finance' ဟုခေါ်သည်။ သင့်အားမြှင့်တင်ထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေ သ၍ နာမတော်ကိုညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၊ နေ့စဉ်ပုံမှန်ကောက်ခံသည်။
Leverage သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချက်တစ်ခုဖြင့်တိုးမြှင့်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်မင်းဟာရွှေကိုရောင်းဝယ်ဖို့သြဇာကိုထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သို့မဟုတ်ပါကသင်သည်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေထက်ညီမျှသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပမာဏအထိအမှာစာကိုသာပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
သို့သော်သြဇာသက်ရောက်မှု ၃: ၁ ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပမာဏကိုသုံးဆပိုများနိုင်သည်။ ဆိုလိုတာကပေါင် ၃၀၀ လက်ကျန်ကရွှေကိုပေါင် ၉၀၀ ရောင်းဝယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, ကုန်သွယ်ရေးသငျသညျဆန့်ကျင်လျှင်သင်သြဇာမြင့်မားသောအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်, သောကြောင့်သင်သည်သင်၏ '' အနားသတ် '' တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်။
သင် FTSE 100 ရောင်းလိုသည်ဆိုပါစို့။ ဇယားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် FTSE 100 သည်လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်းစျေးနှုန်းတက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးတွင် ၅း၁ ကိုသြဇာသက်ရောက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်£ 500 ရှိသည်
၁၀: ၁ ကိုသင်အသုံးပြုသည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ပေါင် ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် FTSE 100 ဈေးနှုန်းသည် ၃% အထိမြင့်တက်လာသည်
သာမာန်အားဖြင့်သင်၏ပေါင် ၅၀၀ အမှာစာသည်ပေါင် ၁၅ ပေါင် (ပေါင် ၅၀၀ မှ ၃%) အထိရရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်သြဂုတ် ၁၀: ၁ ကိုသင်လျှောက်ထားသောအခါသင်၏အမြတ်မှာပေါင် ၁၅၀ (ပေါင် ၁၅ x ၁၀) ဖြစ်သည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏မျက်နှာသာရသည့်အခါသြဇာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုတိုးစေနိုင်သည်။ သို့သျောလညျး - ကြှနျုပျတို့နောကျအပိုငျးတှငျဖျောပွထားသကဲ့သို့, သြဇာသညျသငျသညျကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ် ဆုံးရှုံးမှု.
Leverage Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
ESMA ကန့်သတ်ချက်များကသင့်အားအဓိက Forex အတွဲများပေါ်တွင် ၃၀: ၁ အထိကုန်သွယ်နိုင်သည်
အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည့်အခါသင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်ပေးပါ
Leverage Trading ၏အန္တရာယ်များ - မာဂျင်
သြဇာကိုအသုံးချခြင်းသည်စွန့်စားမှုကင်းမဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ယင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဘာကြောင့်ပေါင် ၅၀၀ နဲ့ရောင်းပြီး ၃၀း၁ အထိတိုးမြှင့်နိုင်မလဲ။ ဒီအဖြေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ အနားသတ်.
မှတ်ချက်။ ။ သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းမည့်အစပျိုးစျေးကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
လုံခြုံရေးအနေဖြင့်သင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သော margin ပမာဏသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏အရွယ်အစားနှင့်သင်လျှောက်ထားလိုသော margin ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်ကပေါင် ၁၀၀၀၀ ကိုသြဇာအဆင့် ၁၀: ၁ နဲ့ရောင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ margin သည်£ 10,000 (£ 10 / 1) ဖြစ်ရန်လိုသည်။ အလားတူစွာ ၅း၁ တွင်ပေါင် ၂၀၀၀၀ ကုန်သွယ်မှုသည်ပေါင် ၄၀၀၀ (ပေါင် ၂၀၀၀၀ / ၅) လိုအပ်သည်။
သင်၏သြဇာရှိသည့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ငွေပမာဏကိုလျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်သင်၏အနေအထားသည်သင့်ကိုဆန့်ကျင်သောအဖြစ်အပျက်တွင်သင်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိသည်။ ၎င်းကိုသင်၏အမှာစာအားဖျက်သိမ်းခြင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းမည့်အချိန်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ ကိန်းဂဏန်းများသည်ပွဲစားများနှင့်အကျိုးဆောင်များအကြားကွဲပြားနိုင်သည်ဆိုပါစို့၊ ဤနည်းလမ်းကိုဖြေရှင်းရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် ၁၀: ၁ တွင်သြဇာသက်ရောက်ပါကအမှာစာတန်ဖိုး ၁၀% (၁/၁၀) ဆုံးရှုံးပါကကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
အလားတူစွာ၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ၂၅% (၁/၄) ဆုံးရှုံးပါကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု ၄: ၁ ရှိကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပြီးအရှုံးကိုယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်သင်၏ margin ၏အရွယ်အစားကိုတိုးနိုင်သည်။
လွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းမည့်အချိန်မတိုင်မီကရိုးရှင်းစွာပိတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ သင်ငွေဆုံးရှုံးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ထားခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်ကပေါင် ၂၀၀ နှင့်ပေါင် ၂၀၀ ကိုသြဇာသက်ရောက်သည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်သင့်ကုန်သွယ်မှုက ၁၀% ကျော်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ပေါင် ၂၀၀ ပေါင်ကျသွားလိမ့်မယ်။ ထိုအရာများနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ ကုန်သွယ်မှုကိုသင်ပိတ်လိုက်လျှင်ပေါင် ၁၀၀ ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏အနားသတ်၏ ၅၀% (၅% x ၁၀: ၁) ဖြစ်သည်။
သင်ပေါင် ၁၀၀ ဆုံးရှုံးနေသော်လည်းနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်နောက်ထပ် ၅% လျော့နည်းသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၁၀% ဖျက်သိမ်းသည့်အချက်ပေါ်လာသည်။ အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ခဲ့လျှင်သင်၏ပေါင်စတာလင် (၂၀၀၀) သာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
သင်ရရှိနိုင်သည့်ဒုတိယရွေးချယ်မှုမှာ margin ထပ်တိုးရန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောပွဲစားများသည်သင်ဖျက်သိမ်းသည့်နေရာသို့ချဉ်းကပ်သောအခါသင့်ရဲ့ margin အရွယ်အစားကိုတိုးချင်လားမလိုချင်လားဟုမေးလိမ့်မည်။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကကုန်သွယ်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိစေပြီး၊ သင့်အားပိုမိုရှူရှိုက်မိသောအာကာသကိုပေးလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Margin ရာထူးတိုးမြှင့်၏ဥပမာ
ခင်ဗျားကအက်ပဲလ်စတော့တွေကိုအနိမ့်ဆုံးအဆင့် 4: 1 မှာကုန်သွယ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ မင်းရဲ့ margin ကပေါင် ၅၀၀ ဖြစ်လို့ပွင့်လင်းတဲ့စျေးမှာ£ 500 နဲ့ရောင်းနေတယ်။ မင်းရဲ့ Apple စတော့ရှယ်ယာတွေကိုရှယ်ယာတစ်ပေါင်လျှင် ၁၈၀ နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ Apple ၏စျေးနှုန်းသည်ပေါင် ၁၃၅ (ပေါင် ၁၈၀ မှ ၂၅%) သို့ကျသွားလျှင်သင်ကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Apple ၏စျေးနှုန်းသည် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။
အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည် ၁% ထပ်ကျသွားလျှင်သင်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်က margin အတွက်နောက်ထပ်£ 500 ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်။
ဆိုလိုသည်မှာလက်ရှိပေါင် ၁၃၆.၈ ဈေးဖြင့်သင်နောက်ထပ် ၂၅% လုံခြုံသောပိုက်ကွန်ကိုသင့်ကိုယ်သင်ပေးလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Apple ကိုဈေးပေါပေါ ၁၀၂.၆ သို့ကျလျှင်သင်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သင့်ရဲ့ margin အနေအထားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ဥပမာနှစ်ခုကိုချန်ထားလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်အက်ပဲလ်၏စျေးနှုန်းသည်မူလကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရှယ်ယာတစ်လုံးလျှင်ပေါင် ၁၈၀ ထက်ကျော်လွန်သွားပါကသင်အမြတ်ရရုံသာမကသင်၏အမြတ် 180:4၏သြဇာကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Apple ၏စျေးနှုန်းသည်ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီး၎င်းသည်£ 102.6 liquidation point ကိုချိုးဖောက်ပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီးကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်လိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး လျှင်ပေါင် ၅၀၀ စီရှိသည့်အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး ၂ ခုကိုထားရှိမည်ဆိုပါကပေါင် ၁၀၀၀ အထိရှိသည်။
သင်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုချိန်တွင်သင်ရရှိနိုင်သောသြဇာပမာဏသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ သင်၌လက်လီရောင်းဝယ်သူသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖောက်သည်၊ သင်၏တည်နေရာနှင့်ပွဲစားသူစသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်သည်ဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်သည့်လက်လီရောင်းဝယ်သူဖြစ်ပါကပွဲစားသည်ဥရောပ Securities and Markets Authority (ESMA) ၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်လက်လီဖောက်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်ရောင်းဝယ်မှုဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာဒီစည်းမျဉ်းတွေကဖော်ပြတယ်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ ESMA နှုန်းအတိုင်းသြဇာကန့်သတ်စာရင်းပြုစုပါပြီ။
for ၃၀း၁ Forex ကုန်သွယ် အားလုံး
✔️ 20: 1 မဟုတ်သော Forex အတွဲများအတွက်၊ ရှေနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်း
10: 1 အဘို့ ကုန်စည်ကုန်သွယ် ရွှေနှင့်အဓိကမဟုတ်သောရှယ်ယာညွှန်းကိန်းများထက်အခြားစျေးကွက်များ
individual ၅: ၁ စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် စျေးကွက်
✔️ 2: 1 cryptocurrencies
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များသည်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
previous ပြီးခဲ့သည့်လေးလပတ်လေးခုစီတွင်အနည်းဆုံးအရောင်း ၁၀ ခုကိုသင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီသည်အနည်းဆုံးယူရို ၁၅၀ ဖြစ်သင့်သည်။
✔️သင်၏ငွေကြေးအစုစုသည်ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်
a သင့်လျော်သောဘဏ္fieldာရေးနယ်ပယ်၌ (အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်) (ထိုကဲ့သို့သောစတော့အိတ်ချိန်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်း) ။
အထက်ပါမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းလိုအပ်ချက်မှာ ၃ သည်အတော်အတန်ပုဂ္ဂလဒိis္ဌာန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားသည်သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်အားလက်ခံမလားဆုံးဖြတ်ရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုစီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းသင်လိုအပ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အထက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပါက၊ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အဓိက Forex အတွဲများ၌ ၅၀၀: ၁ နှင့် ၁၀၀: ၁ ကဲ့သို့သော S&P 500 ကဲ့သို့မြင့်မားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ကျွန်ုပ်ကိုသြဇာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
တနည်းအားဖြင့်သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလျှောက်သွားသောအခါအခြေခံရွေးစရာများစွာရှိသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုအဓိကထားဆွေးနွေးပါမည်။ သင်မေးခွန်းများကိုအောင်မြင်စွာဖြေဆိုပါကသင်၏အနားသတ်စွမ်းရည်သည်အလိုအလျောက်သက်ဝင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အငြင်းပွားမှုအပေါ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်လျှင်သင်အားသြဇာသက်ရောက်ရုံမကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေမည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုပြောခြင်းဖြင့်ပွဲစားအများစုကသင့်ကို Forex နှင့် Forever နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည် CFD ကုန်သွယ် စျေးကွက်တွေဆိုလိုတာကထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္financialာရေးတူရိယာတွေကိုသင်ရနိုင်တယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းသြဇာပွဲစား Picks3စာရင်းပြုစုပါပြီ။ သင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီပွဲစားနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အပိုဆောင်းသုတေသနပြုမှုများသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ထိုသို့ပြောခြင်းနှင့်အတူ, သြဇာကုန်သွယ်လည်းမြင့်မားသောအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလျှင်သင်၏အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သြဇာနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်သည်နောက်ခံအန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်သေချာစေရမည်။ ထို့အပြင်သင်၏အနေအထားကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးရန်သင့်လျော်သော stop-loss များကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းမြင့်မားသောသြဇာပွဲစားသည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ပွဲစားများသည် ESMA မှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအတွက်ပလက်ဖောင်းရှိဖောက်သည်များအားမည်မျှသြဇာပေးမည်ကိုမရွေးချယ်နိုင်တော့ပါ။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များသည်သင်ရောင်းဝယ်လိုသည့်ပစ္စည်းအတန်းပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ESMA နှုန်းအရအဓိက Forex အတွဲများသည်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအတွက် ၃၀း၁ တွင်ဖြစ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များ၏အနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်၊ cryptocurrencies ကို ၂း၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သငျသညျပိုမိုမြင့်မားသြဇာကန့်သတ်မှာကုန်သွယ်ရန်ရှာနေလျှင်, သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အတွက်သင်သည်ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောဘဏ္portfolioာရေးအစုရှယ်ယာနှင့်ဘဏ္fieldာရေးနယ်ပယ်တွင်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အတွေ့အကြုံကဲ့သို့သောစံသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတွင်သြဇာရှိပါကသင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အချိန်တို၊ နှစ်တိုစလုံးသွားနိုင်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားငွေပမာဏအတိအကျကိုဖော်ပြသည်။ ballpark ကိန်းဂဏန်းအနေဖြင့်၎င်းကိုသြဇာသက်ရောက်စေသောအချက်ကိုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်တွက်ချက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၁၀း၁ နှင့် ၅း၁ တို့၏သြဇာသည်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်အချက် ၁၀% နှင့် ၂၀% အသီးသီးရှိသည်။
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သြဇာသက်ရောက်ပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားမှငွေကိုထိထိရောက်ရောက်ချေးယူသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနေဖြင့်, သင်တစ်ညဥ့်ရံပုံငွေနှုန်းကိုကောက်ခံလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစုရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေပါက CFD မှတစ်ဆင့်သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ စတော့ရှယ်ယာ CFD များအပေါ်အများဆုံးသြဇာကန့်သတ်ချက်မှာ ၅: ၁ ဖြစ်သည်။